शब्द श्रद्धा मुनाल दाइ !
अनन्त वाग्ले शनिवार, असोज २१, २०७४ 1026 पटक पढिएको
पुस्तक, पत्रिका र टीभी पहुँचबाहिरका विषय थिए । अनलाइन र इन्टरनेट त शब्दै सुनिएका थिएनन् । फाट्टफुट्ट उपलब्ध हुने किताबपछिको एकमात्र विकल्प थियो रेडियो । रेडियो अर्थात् रेडियो नेपाल । त्यतिबेला अहिलेजस्तो छ्यासछ्यास्ती एफएम थिएनन् । रेडियो नेपाल नै एकमात्र मनोरञ्जन ग्रहणको माध्यम थियो । ज्ञान र सूचनाको स्रोत । जिज्ञासा र कौतुहल मेट्ने साधन । घरमा सबैजना सुतेपछि सिरानीमा बज्ने साथी । बारीमा काम गर्दागर्दै डिलमा गुञ्जने अन्तरंग मित्र ।
फुर्सदमा रेडियोका सबै कार्यक्रम लगातार सुन्नु धेरैको निर्विकल्प माध्यम थियो, जस्तो कि मेरो । बिहान ६ बजे सुरु हुने धार्मिक कार्यक्रमदेखि राति ११ बजे बज्ने ‘ श्रीमान् गम्भीर नेपाली...’ (तत्कालीन राष्ट्रिय गान) अघिका पुराना गीत वा अनुरोध संगीतसम्म पनि नबिराई सुनिन्थ्यो । कृषि कर्मबाट थकित भई घर फर्कंदा होस् या रत्तेली उत्सवहरूमा केही लोकगीत खुबै बज्थे । गाइन्थे । सुनिन्थे । स्वर मिलाइन्थे टुक्रे उस्तादका रूपमा । यिनैमध्येका यी दुई गीत पनि निकै लोकप्रिय थिए :
तिम्रो घर चाँचरी तिँ पर होइन र !
तिम्लाई हाम्ले चाँचरी चिनेको छैन र !
आयो ढल्काउँदै झमझम इस्टकोट..
हे.. ..उकालीमा पनि हजुर मोटर जाँदो रैछ
ड्राइभर दाइलाई सासना माया सरर जाऊँ हिँड रेलैमा..
यी दुवै गीतमा वासुदेव मुनाल र पाण्डव सुनुवारको स्वर थियो । दुवै रेडियो नेपालका हस्ती । हस्ती प्रस्तोता । वासुदेव मुनाल ‘बाल कार्यक्रम’का आइकन थिए भने सुनुवार ‘फोन इन’लगायत अन्य कार्यक्रमका । एक आपसमा ‘वासे’ र ‘अनुहार न दनुवार’ भनी ठट्टा र प्रेम गर्ने यी दुवै अब हामीमाझ रहेनन् । सुनुवार केही वर्षअघि नै बिदा भइसकेका थिए भने मुनाल गत दसैंको अष्टमीको साँझलाई अँधेरो बनाइगए । हाम्रो मन अमिलो बनाई अलबिदा भए । अनि दिनको घामले ओइलिए पनि साँझको शीतलमा ब्युँतने बाबरी सधैंका लागि मुर्झाइगयो ।
अलि दिनअघि बाल विकास समाजका पूर्वअध्यक्ष शरद शर्माले मुनाल दाइको स्वास्थ्य नाजुक भएकाले मिडियाहरूमार्फत् ध्यानाकर्षण गराउन भन्नु भएथ्यो । उपचारका लागि तत्काल दिल्ली जाँदै हुनुहुन्छ भनेर पनि उहाँले भन्नुभएको थियो । दिल्लीमा उपचार हुँदै होला र ठीक होला भन्ने हाम्रो आशा रह्यो । यता सुटुक्कै मुनाल दाइ भक्तपुर अस्पतालबाटै बिदा हुनुभएछ । हाम्रै नजिकबाट । हामीलाई सम्झनाको अझै अर्को कुरी-कुरी थमाइदिएर ।
बाँसुरीको मीठो पार्श्व धुनपछि बालबालिका समूहको ‘जय नेपाल’ कोरससँगै गुञ्जन्थे मुनाल दाइ- ‘आओ । मेरा प्यारा प्यारा भाइबैनी हो ! रेडियो नजिकै आओ । अब हाम्रो आजको बाल कार्यक्रम सुरु हुन्छ ।’
मुनाल दाइलाई स-शरीर नभेट्दै उनको सुरिलो आवाज मेरो आफन्त बनिसकेको थियो । हरेक साँझ बज्ने बाल कार्यक्रमका पर्याय थिए मुनाल दाइ । बाँसुरीको मीठो पाश्र्व धुनपछि बालबालिका समूहको ‘जय नेपाल’ कोरससँगै गुञ्जन्थे मुनाल दाइ- ‘आओ । मेरा प्यारा प्यारा भाइबैनी हो ! रेडियो नजिकै आओ । अब हाम्रो आजको बालकार्यक्रम सुरु हुन्छ ।’ बालबालिकाका रचनाका साथै कथा, कविता, जीवनी, नाटक आदि बालहितकारी सामग्री प्रसारण हुने यस कार्यक्रम सम्पूर्ण नेपाली बालबालिकाको ढुकढुकी बनेको थियो । सोही कार्यक्रमबाट नै नुपूर भट्टाचार्य, गोपिनी पाण्डे, प्रभात विजयानन्दजस्ता बालबालिकाका प्रिय नामहरू पनि पहिलोपल्ट मैले सुनेको थिएँ ।
मुनाल दाइलाई मैले पहिलोपल्ट हातेमालो सञ्चारको कुपण्डोलस्थित कार्यालयमा भेटेको थिएँ । मित्र गोपी सापकोटा (हाल बेलायत)ले मलाई त्यहाँ बोलाएका थिए । हातेमालोमा अशेष मल्ल, वासुदेव मुनाल र गोपी सापकोटाहरू निकै सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । हातेमालोबाटै ‘सुनकेस्रा’ नामक बालसाहित्यको राम्रो पत्रिका निस्कन्थ्यो ।
त्यसमा अशेष दाइ प्रधान सम्पादक तथा मुनाल दाइ तथा गोपीजीहरू सम्पादक समूहमा हुनुहुन्थ्यो । म पहिलोपटक सहभागी हुँदै गरेको हातेमालोको त्यस चकटी बैठकमा अशेष दाइ र गोपीजीसँगै एउटा अपरिचित तर बोली एकदम परिचित लाग्ने होचो कदको चमकदार मानिस थिए । उनका यता र उता घुमिरहने चलाख आँखा निकै तेजिला थिए । बोलिरहने मिजासका तिनै होचा कदवाला हुनुहुँदोरहेछ- दाजु वासुदेव मुनाल । त्यतिबेला म कान्तिपुर दैनिकको ‘कोपिला’ परिशिष्टांकमा काम गर्थेँ । पहिलो भेटमै मुनाल दाइ चिरपरिचितजस्तो पाएँ । उहाँले कोपिलाका मेरा लेख, रचनाको प्रशंसा गर्नुभयो र लेखनमा अझै राम्रो गर्न हौसला दिनुभयो ।
मुनाल दाइसँग दोस्रो भेट उहाँकै घरमा भएको थियो । कोपिलाको स्तम्भ ‘म सानो छँदा’का लागि संवादका क्रममा । त्यसबेला सिनामंगलको एक सामान्य घरको असजिलो सिँढी हुँदै जानुपर्ने कोठामा लगेर म र फोटो पत्रकार नवराज वाग्लेसँग दाइ निक्कै गफिनु भएको थियो । विराटनगरमा सांगीतिक÷सांस्कृतिक कामका लागि गठन गरेको मुनाल क्लबकै नामबाट आफ्नो नाममा कोइराला थर छाडेर मुनाल जोडेको कथा उहाँले सुनाउनुभएको थियो । जीवनका विभिन्न घटना सुनाउने क्रममा बेस्सरी हाँस्नुभएको थियो र गम्भीर हुँदै टिलपिल टिलपिल आँसु पनि भर्नु भएको थियो । यसबाट उहाँको भावुक तथा नरम प्रकृतिसँग पनि हामी परिचित भएका थियौं ।
मुनाल दाइको बाल कार्यक्रमका श्र्रोता आम जनताका छोराछोरीदेखि राजाका छोराछोरी दीपेन्द्र र श्रुतिसमेत रहेछन् । छोराछोरीले रेडियोको बाल कार्यक्रम मन पराएको थाहा पाएका राजा वीरेन्द्रले उहाँलाई दरबार बोलाएर खानासमेत खुवाएका रहेछन् । आँखामा खुसी छचल्क्याउँदै मुनाल दाइले सुनाउनुभएको थियो ।
तीन दशकभन्दा लामो समय रेडियो नेपालमा बिताएका मुनाल ‘बाख्रा झर्योो भीरैभीर, भैंसी झर्योो खोला, गोठालाले गाको गीत नबिर्सनु होला’ भन्ने लोकगीतबाट चम्किएपछि संगीतकार नातिकाजीमार्फत रेडियो प्रवेश गर्नुभएको थियो । ‘गोठालाले गाको गीत नबिर्सनु होला’ शीर्षकमै उहाँको बालक-कालबारे कोपिलामा स्टोरी छापिएपछि मुनाल दाइले निक्कै खुसी भएर मलाई फोन गरी धन्यवाद दिनुभएको थियो । यसरी कृतज्ञताको गुणले पनि भरपुर हुनुहुन्थ्यो वासुदेव मुनाल ।
‘नेपाल बालसाहित्य समाज’मा अर्को भेट भयो मुनाल दाइसँग । त्यतिबेला उहाँको ब्रेन हेमरेज भइसकेको थियो । अलिक निराशावादी कुरा बढी गर्नुहुन्थ्यो । त्यतिबेला म नेपाल बालसाहित्य समाजमा सचिव थिएँ । हामीले समाजका तत्कालीन समयमा दिवंगत भएका स्रष्टाहरू रमेश विकल, जनक हुमागाईं, शारदा अधिकारी ढकाल र वासु रिमाल ‘यात्री’का जीवनीका छुट्टाछुट्टै पुस्तक प्रकाशित गरेका थियौं । मुनाल दाइ पनि बालसाहित्य समाजको सदस्य बन्नुभयो ।
अनि उहाँले भन्नुभयो, ‘म पनि धेरै बाच्दिनँ, मेरो पनि एउटा यस्तो किताब चाहिँ निकाल्दिनु है !’ (बालसाहित्य समाजको नेतृत्वसामु म मुनाल दाइको निवेदन यसै आलेखमार्फत बोधार्थ गराउन पनि चाहन्छु ।)
नेपाल बालसाहित्य समाजको २०६८ सालमा पाल्पामा भएको वार्षिक सम्मेलनमा पनि मुनाल दाइ सहभागी हुनुहुन्थ्यो । सम्मेलनको अन्तिम दिन मदनपोखराका स्थानीय बासिन्दाले हामीलाई रात्रि भोजन गराउनुभएको थियो । त्यस रात हाम्रो वि श्राम पनि स्थानीय बासिन्दाको घरमा बाँडिएर दुई-चार, दुई-चारजना गरी बस्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो । यसमा मुनाल दाइ, रामबहादुर पहाडी, सूर्य बीसी र म एउटै घरको एउटै कोठामा परेका थियौं । निम्नवर्गीय परिवारको त्यस घरमा सिरक, डस्ना र बिछ्यौना मैलाधैला, काला र गन्हाउने थिए । यसमा हामी तीनजना दिग्मिगायौं । मुनाल दाइ भने कुनै अब्जेक्सन नजनाई निर्धक्क सुत्नुभयो । अनि हामी पनि सुतेका थियौं ।
यसरी जहाँ जुन परिस्थितिमा घुलमिल हुन र त्यसलाई सहज स्वीकार्न सक्ने उहाँको गुणबाट हामी प्रभावित भएका थियौं । यस्ता असल र प्रतिभाशाली मुनाल दाइ अब हामीसँग रहनुभएन । उहाँको महाप्रस्थान भए पनि धेरै बालबालिकाका प्रेरणा र संगीत पारखीका एक प्रिय व्यक्तिका रूपमा उहाँ बाँचिरहनु हुनेछ । उहाँले रेडियो बाल कार्यक्रम तथा हातेमालो सञ्चारमार्फत धेरै बालबालिकालाई सिर्जनात्मक लेखन, उद्घोषण कला र वाचनको सीप प्रदान गर्नुभएको छ । आफैंले थुप्रै बालनाटक, कथा र गीत लेखन, संकलनको काम गर्नुभएको छ ।
माथि उद्धृत गरिएबाहेक ‘सक्यो नानी सक्यो नानी सक्यो नानी, नुवाकोटे नानी गाजल लाउने तिम्रो बानी सक्यो नानी’, ‘चुरोट बिँडी म खाँदै नखाने, तिम्लाई नलिई म जाँदै नजाने’, ‘चैनपुरको करुवामा सुन्दरीजलको पानी’जस्ता मुनालकृत लोकगीत निकै लोकप्रिय छन् । रेडियो नेपालले २०३० सालमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय लोकगीत प्रतियोगितामा उहाँ प्रथम नै हुनुभएको थियो ।
यसैगरी ‘छुनुमुनु छुनुमुनु गर्दै आइन् आँगनीमा छोरी, कहिले भन्छिन् हात्ती ल्याइदेऊ कहिले भन्छिन् घोडी’, ‘स्कुलै जाने कान्छाले गोजीमा गुच्चा हाल्दैन’जस्ता उनका बालगीत पनि धेरैले रुचाउँछन् । ‘हराएको हात’ नामक उहाँको बालकथासंग्रह बालबालिकाबीच प्रिय थियो । उहाँले थुप्रै बालनाटक पनि लख्नुभएको छ । कार्यक्रम प्रस्तोता र लोकगायकका साथै फुटबलको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने राम्रो कमेन्टेटरको रूपमा पनि उहाँको परिचय स्थापित छ । २००६ साल असार ६ गते विराटनगरमा जन्मेका वासुदेव मुनाल पछिल्लो समय घाँटीको क्यान्सरबाट पीडित हुनुहुन्थ्यो । शब्द श्रद्धा मुनाल दाइ !
शनिवार, फागुन १२, २०७४ जंगली मुला होइन सारामागो
शनिवार, फागुन १२, २०७४ मान्छेको घरमा सुत्केरी चितुवा
शनिवार, फागुन १२, २०७४ गाईको कन्तबिजोग
शनिवार, फागुन १२, २०७४ मझधारमा माइला
शनिवार, फागुन १२, २०७४ लुम्बिनीमा भेटिएका ‘आतंककारी’
शनिवार, फागुन १२, २०७४ बूढाबूढीको सुखमा आरिस किन ?
शनिवार, फागुन १२, २०७४ शुक्रराजको स्वर्ग
शनिवार, फागुन १२, २०७४ काँठ : एक विभक्त संसार
अब नेपालको आफ्नै भू-उपग्रह 27259
एक्सनमा लालबाबुः तारे होटल, सिमेन्ट उद्योग र अस्पतालमाथि कारवाही 3206
सुन्दरीको एउटा ट्वीटले डुबायो एक खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ ! 7766